Xarunta Telefishinka Universal ee Magaalada Muqdisho oo dib u hool bilaabaya – STAR FM SOMALIA
Xarunta Telefishinka Universal ee Magaalada Muqdisho oo dib u hool bilaabaya
Ka dib dadaal badan oo loo galay sidii dib loogu fasixi lahaa Xarunta Universaltv Ee Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa xalay suurta gashay in Dowladda Somaliya ay fasaxdo.
Taliska Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka, ayaa Maamulka TV-ga Universal u sheegay in Xaruntooda laga qaaday xayiraaddii lagu soo rogay 2-dii bishan.
Tani waxay daba socotaa dadaalo Arbacadii Xabsiga Godka Jilicow looga sii daayay Agaasimaha Telefishinka Universal Ee Bariga Afrika, C/laahi Xersi Kulmiye iyo barnaamij soo saare, Cawil Daahir Salaad.
Odayaasha Dhaqanka & Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya qaarkood, ayaa waxay dadaal badan ku bixiyen, sidii dib loogu fasixi lahaa Xarunta Telefishinka Universal.
Dowladda Somaliya, ayaa waxay ka carootay Barnaamijka Dood Wadaag oo 30-kii bishii hore ee September ka baxay Xarunta Universaltv Ee Magaalada Muqdisho, loogana hadlaayay xaalka uu dalku ku sugan yahay.
Qaramada Midoobe, Britain, Mareykanka iyo Ururada Saxaafadda Somaliya, ayaa si isku midda u cambaareeyay xariga loo gaystay Suxufiyiinta iyo xanibaadda la saaray Xarunta Universaltv.
Warbixin ay Jimcihii soo saartay Hay’adda U Dooda Xuquuqda Suxufiyiinta CPJ, ayaa waxay ku sheegtay in Somaliya ay noqotay dalka ugu halista badan caalamka ee Suxufiyiintu ka hawlgasho.
Ciidamada dawlada oo sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen sargaal ka tirsan al-shabaab
Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa maanta waxaa uu xaraga ka jaray taawarka cusub ee garoonka Aadan Cadde
DHAGEYSI:- WARKA HABEEN STARFM 13.FEB.2022
TABINTA IYO SOOSAARIDDA WARKA HABEEN (fARTUUN AAMUSANE )
FARSAMADDA (MOWLIID AHMED NUUR).
DHAGEYSI:- Barnaamijka Saaka Iyo Starfm
TABINTA IYO SOOSAARIDDA BARNAMIJKA (CABDI RAXMAAN MUKHTAAR)
Fariinta Wacyigelinta ka hortaga Askareynta Caruuta
Fariintaan ayaa waxaa ay kaaga timid Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Jubaland waxaana ay xambaarsantahay Fariin Wacyigelin u ah bulshada Soomaaliyeed kuna saabsan ka hortaga Askareynta Caruurta aan qaangaarin. Wasaaradda ayaa amraysa cid waliba oo ay quseyso in ay ka foojignaato Askareynta caruurta aanan qaangaarin.
Halkaan hoose ka dhageyso Fariinta Wacyigelinta ka hortaga askareynta Caruurta.